खण्ड ४ – पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य – Word of Truth, Nepal
खण्ड ४ – पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य
प्रेरित ५:३ अनुसार हनानियाले ________________सँग झूट बोले। प्रेरित ५:४ अनुसार हनानियाले ________________सित झूट बोले। तसर्थ यहाँ पवित्र आत्मालाई _____________ भनेर जनाइएको छ।
यूहन्ना १६:१३-१४ – “तापनि जब ___________ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब _____ले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्‍याउनुहुनेछ; किनभने _____ले _______ तर्फबाट बोल्नुहुनेछैन, तर जे _____ले सुन्नुहुनेछ, त्यही बोल्नुहुनेछ; अनि _____ले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ।” यी दुइटा पदहरूमा येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्मालाई एक व्यक्ति मान्नुभएको छ कि एउटा “शक्ति” वा “प्रभाव” वा “वस्तु” मान्नुभएको छ? ______________।
____ ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेकै घडीमा एक व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले नयाँ गरी जन्माउनुहुन्छ (“नवीकरण”) र नयाँ जीवन दिनुहुन्छ।
____ सबै विश्वासीहरू एउटै आत्माद्वारा ख्रीष्टको शरीरभित्र बप्‍तिस्मा गराइएका हुन्छन् र ख्रीष्टको मण्डलीको अङ्गहरू बनाइएका हुन्छन्।
____ पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासीभित्र वास गर्नुहुन्छ।
____ प्रत्येक विश्वासी छुटकाराको दिनसम्म छाप मारिएको हुन्छ र उक्त छाप पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
क) १ कोरिन्थी १२:१३
ख) यूहन्ना ३:५ तीतस ३:५
ग) एफेसी १:१३-१४; एफेसी ४:३०
घ) २ तिमोथी १:१४; १ कोरिन्थी ६:१९-२०
कसैसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, के ऊ साँचो ख्रीष्टियन हो (के ऊ ख्रीष्टको हो?) ____ (रोमी ८:९ पढ्नुहोस्) विश्वासीको सिद्ध शिक्षक को हुनुहुन्छ (यूहन्ना १६:१३; १ यूहन्ना २:२०; २:२७; १ कोरिन्थी २:९-१४)? ____________________
पलपलमा ________________ले भ_________ हुनु मुक्ति पाएका सबैको सौभाग्य र कर्तव्य हो (एफेसी ५:१८)। यसो गर्नाले उसको जीवनमा ________को फ____ (गलाती ५:२२-२३) देखिनेछ अनि येशू ख्रीष्टको महिमा हुनेछ (यूहन्ना १६:१४) र विश्वासीचाहिँ ख्रीष्टको रूपमा झन्-झन् बदली हुँदै जानेछ (२ कोरिन्थी ३:१८)।
विश्वासीले पवित्र आत्मालाई याद गरिरहनुपर्छ र उहाँको सहायता पाइरहनका लागि उहाँमा भर पर्दै जिउनुपर्छ। उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सधैं आदर गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनलाई सत्य सावित तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले सधैं परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको पुत्रलाई उच्च गराउनुहुन्छ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-14 14:07:292020-10-30 10:51:01खण्ड ४ – पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य
खण्ड ३ – ख्रीष्टको व्यक्तित्व...खण्ड ५ – मानिसको पूर्ण भ्रष...